YOUnified Celebration 2017 | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
YOUnified Celebration 2017
Posted on December 1, 2017 by MYEO in Fun //0Comments
Duration : 4PM to 6:30PM
Location : The American Center
YSEALI YOUnified and the fourth anniversary of the creation of YSEALI will be celebrated on December3withaconcert event at the American Center in Yangon.The special guest John Thanga will be the game master of the day.
Let’s listen to great music and enjoy the amazing dance moves of professional dance crew Life & Dance and the spinning of DJ Ivan while playing some fun games.
Please bring your friends to meet some of the best young people in Myanmar!
Entry is free. Free drinks and food will be available. We look forward to seeing you there!
YSEALI YOUnified အစီအစဉ်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှလူငယ်ခေါင်းဆောင် မွေးထုတ်ပေးရေး အစီအစဉ် (YSEALI) စတင်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဖျော်ဖြေပွဲ အခမ်းအနားတစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်စင်တာ မှာ လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ကျရင် ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂီတအလန်းတွေ နားဆင်ပြီး Life & Dance အကအဖွဲ့ရဲ့ ကကွက်ဆန်းတွေနဲ့ DJ Ivan ရဲ့ တင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာ ကစားနည်းတွေကို ဆင်နွှဲခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးဧည့်သည်တော် John Thanga ကတော့ ဂိမ်းမာစတာအဖြစ်နဲ့ ပျော်စရာ ကစားနည်းတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက အတော်ဆုံး လူငယ်တစ်ချို့နဲ့ တွေ့ရအောင် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ညနေ ၄း၀၀ နာရီကနေ ၆း၃၀ နာရီအထိ အမေရိကန်စင်တာကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ လာရောက်ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ဝင်ကြေးက အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အစားအသောက်တွေကိုလည်း အခမဲ့ဧည့်ခံမှာ ဖြစ်လို့ ဆက်ဆက်လာခဲ့ကြနော်။
YSEALI YOUnified အစီအစဉျနဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှလူငယျခေါငျးဆောငျ မှေးထုတျပေးရေး အစီအစဉျ (YSEALI) စတငျခဲ့တဲ့ လေးနှဈပွညျ့ အထိမျးအမှတျ ဖြျောဖွပှေဲ အခမျးအနားတဈခုကို ရနျကုနျမွို့ အမရေိကနျစငျတာ မှာ လာမယျ့ ဒီဇငျဘာ ၃ ရကျနကေ့ရြငျ ကငျြးပမှာဖွဈပါတယျ။
ဂီတအလနျးတှေ နားဆငျပွီး Life & Dance အကအဖှဲ့ရဲ့ ကကှကျဆနျးတှနေဲ့ DJ Ivan ရဲ့ တငျဆကျမှုတှနေဲ့အတူ ပြျောရှငျစရာ ကစားနညျးတှကေို ဆငျနှဲခှငျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ အထူးဧညျ့သညျတျော John Thanga ကတော့ ဂိမျးမာစတာအဖွဈနဲ့ ပြျောစရာ ကစားနညျးတှကေို တငျဆကျပေးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံက အတျောဆုံး လူငယျတဈခြို့နဲ့ တှရေ့အောငျ ဒီဇငျဘာ ၃ ရကျ၊ တနင်ျဂနှနေေ့၊ ညနေ ၄းဝဝ နာရီကနေ ၆း၃၀ နာရီအထိ အမရေိကနျစငျတာကို သူငယျခငျြးတှနေဲ့အတူ လာရောကျကွပါလို့ ဖိတျချေါလိုကျပါတယျ။
ဝငျကွေးက အခမဲ့ဖွဈပွီး အစားအသောကျတှကေိုလညျး အခမဲ့ဧညျ့ခံမှာ ဖွဈလို့ ဆကျဆကျလာခဲ့ကွနျော။